musha ASIAN FOOTBALL STORI Faiq Bolkiah Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yakapedzisira Kugadziriswa pane Dai 4, 2020
Chinyorwa chedu chinokupa iwe kufukidzwa kwakazara kweFaiq Bolkiah's Childhood Nhau, Biography, Upenyu hwepakutanga, Chokwadi cheMusikana, Hupenyu hweMunhu, Mararamiro, Mhuri, uye zvimwe zviitiko zvine mukurumbira kubva paudiki hwake nguva kusvika paakazivikanwa.
Hupenyu nekusimuka kwaFaiq Bolkiah. 📷: IG, Mirror & Chinangwa.
Ehe, munhu wese anoziva kuti winger ndeimwe yeiyo vapfumi nhabvu vatambi munyika. Nekudaro, vateveri vashoma chete ndivo vakaverenga nhoroondo yaFaiq Bolkiah, iyo inonzwisisika. Pasina imwezve ado, ngatitangei.
Faiq Bolkiah Nyaya Yehudiki Yemwana:
Imwe yemifananidzo yekutanga inozivikanwa yehudiki yaFaiq Bolkiah. 📷: Instagram.
Faiq Jefri Bolkiah akazvarwa musi we9th waMay 1998 kuLos Angeles muCalifornia, USA. Iye ndiye mumwe weketi yemapatya akazvarwa kuna amai vake vanozivikanwa uye kuna baba vake, Jefri Bolkiah (Muchinda weBrunei).
Kunyangwe Faiq akazvarwa muAmerican uye aine nyika mbiri (American neBruneian), akakura zvakanyanya akakurira kuUnited Kingdom achitarisirwa nemuchengeti wake -Dennis Wallace (anoshanda wekare weNBA).
Kukura muBerkshire kuUK padivi peukama - Ukasyah, mudiki Faiq aive mudiwa wenhabvu aigara achifara kuenda kuminda aine bhora patsoka dzake. Muchokwadi, nhabvu yaive mutambo yakatora nzvimbo yepakati muhuduku hwake.
Faiq Bolkiah akakurira zvakanyanya kuBerkshire kuUK 📷: IG uye Mepu.
Faiq Bolkiah Mhuri Yemhuri:
Kunyangwe asati atamira kuUK achibva kumusha kwake - Brunei (kwaakakurira), Faiq akange atove mutambi wenhabvu, uye vabereki vake vakapfuma vaimutsigira.
Nekudaro, vakamutumira makiromita gumi nemana kubva kuBrunei kuti adzidze uye kuzvikurira mubhora kuUnited Kingdom, kure nezvinotsausa zvinouya neupfumi hwemhuri yake.
Mudiki Faiq Bolkiah nemumwe wevabereki vake. 📷: Mirror.
Faiq Bolkiah's Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Kutenda kune hanya uye kusimba kwemuchengeti wake - Dennis Wallace, Faiq akagona kunyatsobatanidza vadzidzi vepaWoolton Hill Junior muBerkshire nekutamba nhabvu parutivi rwemusha - Woolton Hill Argyle.
Banner yekirabhu kwaakatora matanho ake ekutanga munhabvu yemakwikwi. 📷: WooltonHill.
Mutambi wenhabvu akaenda kunodzidza paTorngrove Prep Chikoro mumusha uri padyo weHighclere apo muchengeti wake akatanga kuita mafambiro ekupedzisira anozongoona iyeye ane makore gumi nemaviri ekutanga achitamba yeAFC Newbury muna11.
Faiq Bolkiah Yekutanga Kwehupenyu Hupenyu:
Wakanga uchiziva here kuti Faiq akamira mushe mumwaka wake wekutanga kuAFC Newbury's nekuda kwehunyanzvi hwekuona neziso nehungwaru pamwe nebhola? Pamusoro peizvozvo, mudiki aive zvakanyanya pasi pasi, zvekuti vashoma chete vashandi vepo netsaona vaiziva nezvemhuri yake yakapfuma yemhuri.
Mafungiro akadzika-epasi paakadaro aisasiyana apo Faiq akatanga kutamba kuSouthampton mumwaka unotevera. Uyu mudiki anozvininipisa akaenderera mberi nekuita bvunzo pfupi neFacebook FC asati ajoina Arsenal FC mugore ra2013.
Akave chikamu chehurongwa hwevechidiki hweArsenal muna 2013. 📷: Facebook.
Faiq Bolkiah's Biography - Road To Fame Nyaya:
Yakanga iri neArsenal iyo Faiq ane makore gumi nemaviri akahwina zita rake rekutanga rakakosha sezita rake pazita rekubatsira The Gunners U15 kukunda mukombe weShumba City Cup mukusanangurwa kwevechidiki veSwitzerland.
Faiq paakadzokera kuArsenal muna 2014, aive netariro yeramangwana rakajeka neChelsea FC, yaakakweretesa siginecha yake gore rimwe chete. Nekudaro, zvinhu zvakaenda kumaodzanyemba sezvo iye asina kupihwa nguva yakakwana yekutamba nehurongwa hwevechidiki vechikwata ichi.
Fortune haana kumunyemwerera paChelsea FC 📷: FB.
Faiq Bolkiah's Biography - Rise To Mukurumbira Nyaya:
Nekudaro, mukomana anodikirira akasiya timu gore rimwe gare gare muna 2015 kuti atange kuyedza naStoke City vasati vasaina Leicester City muna 2016. Paasayina iyo Foxes, Faiq yaive chinhu chinowanzoitika kumapoka eFoxes academy, kusanganisira mu 2016 / 17 UEFA Youth League.
Achikurumidza kusvika munaKurume 2020, Faiq anoridzira timu yeReicester, uye achiri kufanira kuita mutambi wekutanga wechikwata cheFoxes kunyangwe ari mutungamiriri akakurumbira pachikwata chenyika cheBrunei uye anozivikanwa zvakanyanya se mupfumi murefu munyika. Chero kutungamira kwake kwebasa rake tilts, vamwe, sezvavanotaura, yaizogara iri nhoroondo.
Iyo winger yakakurumbira kunyangwe isiri kugadzira yekutanga-timu for Leicester. 📷: Chinangwa.
Faiq Bolkiah musikana waani?
Kuenderera mberi kune hupenyu hwaFaq Bolkiah hwerudo, zvingave zvisina musoro kuti uone kuti haana musikana nekuda kwekuedza kumusunga nemukadzi mumwe chete kwakabviswa.
Kuongororwa kwemapeji ekuwina kwea winger pa Instagram kwaizoratidza akawanda mafoto ake nevakadzi vakasiyana. Saka nekudaro, zvakawoma kuudza musikana wake kubva kune vamwe vakadzi. Hazvizivikanwe kuti Faiq ane mwanakomana kana mwanasikana kunze kwemuchato.
Faiq Bolkiah anodanana ndiani? 📷: LB & Instagram.
Faiq Bolkiah's Family Hupenyu:
Izvo zvinenge zvisingagone kutaura pamusoro paFaiq Bolkiah pasina kuita mareferensi kumhuri yake inoshamisa. Tinokuunzira chokwadi pamusoro pemhuri yemhuri yaFaiq Bolkiah kutanga nevabereki vake.
Nezve Baba vaFaiq Bolkiah:
Jefri Bolkiah ndiye baba weanokunda. Iye akazvarwa musi we 6th waNovember 1954 kuna Omar Ali Saifuddien III, uyo wechi 28 Sultan weBrunei. Saka, Jefri ari Muchinda uye mugari wenhaka kuchigaro, asi haana kuzova Sultan. Panzvimbo iyoyo, mukoma wake weCrown Prince Hassanal Bolkiah akatora chigaro mushure mekunge Omar atora danho rekutora chigaro. Jefri aimbova gurukota rezvemari remafuta akapfuma anonzi Brunei. Akapfuma zvinoshamisa uye anorarama hupenyu hunowandisa.
Faiq Bolkiah baba vaJefri vakapfuma zvakanyanya. 📷: BleacherReport.
Pamusoro paamai vaFaiq Bolkiah:
Panguva yekunyora Biology yaFaiq Bolkiah munaKurume 2020, kwete zvakawanda zvaizivikanwa nezvaamai vake. Nekudaro, iye winger akamboburitsa pachena kuti amai vake nababa vake vaimutsigira mukumubatsira kuzadzisa zviroto zvake zvekuve mutambi wenhabvu. Chaizvoizvo, anovaona sevamiriri vekumudzidzisa zvese zvepfungwa uye nemuviri. Mune mamwe mazwi, chingave chinhu chakakura kunyora nezve nyaya yehudiki yaFaiq Bolkiah pasina kubvuma mabasa evabereki vake vanotsigira.
About Faiq Bolkiah's S siblings:
Havasi vanhu vazhinji vanoziva kuti Faiq ane hanzvadzi mapatya inoenda nezita - Qiana Faiq Bolkiah. Qiana ndiyo yakanaka yevakadzi vhezheni yeFaiq. Vanodanana uye vanokoshesa mumwe nemumwe uye vane mufananidzo wakanaka unotaura nezve kemikari iri pakati pavo. Asides Qiana, Faiq ane vamwe vana vamai veropa uye hafu-vanun'una avo vasina kunyanya kuzivikanwa nezvake.
Faiq Bolkiah nemunin'ina wake Qiana Faiq Bolkiah. 📷: Giramu.
About Faiq Bolkiah's Relatives:
Achienderera mberi kuna Faiq Bolkiah madzitateguru nemidzi yemhuri, sekuru vake baba vake vaive Omar Ali Saifuddien III, nepo pasina zvinyorwa zvevamwe sekuru vake. Babamunini vaFaiq ndiCrown Prince Hassanal Bolkiah, Sultan weBrunei, apo mumwe wevatezvara vake anoenda zita rekuti Ukasyah. Nekudaro, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezve babamunini vaFaiq, babamunini uye nababamunini.
Faiq Bolkiah Hupenyu hweMunhu:
Taura nezvehunhu hunotsanangura Faiq Bolkiah's persona, waizviziva here kuti anotungamirirwa neshungu, kuzvininipisa uye kutarisa? Zvakare, iyo winger inoshanda nesimba uye inodisa sevanhu vanozvarwa pasi pechiratidzo cheTaurus zodiac.
Kana Faiq asiri kudzidzisa kana kutamba nhabvu, anogona kuwanikwa achifarira kuita zvemitambo zvinosanganisira kutamba basketball, kutasva mabhiza, kufamba, kushambira uye kuva nenguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Basketball inomira padivi nerudo rwake rwebhola. 📷: Giramu.
Faiq Bolkiah's Lifestyle:
Nezve mashandisiro anoita Faiq Bolkiah uye kushandisa mari yake, waizviziva here kuti mambure ake akakosha muna 2020 akamira pamari inofungidzirwa kupfuura mabhiriyoni makumi maviri emadhora? Hukuru hweupfumi hwemunhu anokunda hwakabva kunhaka yake senhengo yemhuri yekwaBrunei Royal.
Zvakare, Faiq anoita mari yakawandisa kubva kumabhonzo ekutsigira seNike zvakare kubva pamubhadharo nemiripo yaanogamuchira yekutamba nhabvu. Pasina mubvunzo kutaura, Faiq anogona kugara mune chero imba yaanoda zvisinei nemitengo. Iye zvakare ane motokari dzekunze uye anofamba nemimakwenzi anodhura ayo ari chikamu chemakoni.
Iye akakosha madhora makumi maviri emadhora panguva yekunyora vachiri Messi uye Ronaldo akakosha madhora mazana mana nemakumi mana emadhora zvakateerana. 📷: Mirror uye PhotoFunia.
Chokwadi Pamusoro paFaiq Bolkiah:
Kuputira yedu Faiq Bolkiah humwana nyaya uye biography, hezvino zvishoma zvisingazivikanwe chokwadi nezve winger.
Faiq mutendi anoshandisa kuSunni Islam. Iko kudavirwa kunonyanya kuitika muBrunei (kuverenga kweinosvika makumi matanhatu neshanu echinamato cherudzi). Icho zvekare chinamato chemhuri yekwaRoyal yenyika.
Chokwadi chechokwadi # 2: Chiri:
Haisi nguva yese yaunoona vatambi venhabvu vane kitsi hombe kunge mhuka dzinovarairwa, kunyanya kana katsi iri tiger. Ndozvinazvo chaizvo izvo zvaFaq zviri zvake. Akave ne tiger naye kubva panguva yaive cub.
Tarira winger uye chipfuyo chake chikuru. 📷: Mirror.
Chokwadi # 3: Tattoos:
Kusiyana nevechidiki vechidiki vekutiza nhabvu, Faiq haana maratidziro kana hunyanzvi hwemuviri saApril 2020. Akangoita kureba nehurefu hwake uye uremu hwosanganiswa nemamita mashanu, 5 inches & 9kg, zvichiteerana.
Faiq Bolkiah kuberekwa kwegore - 1998 raive gore rakakosha rezviitiko zvehunyanzvi hwekuvaraidza uye zvevaraidzo. Raive iro gore rekutsvaga injini Google rakavambwa. 1998 akaona kuburitswa kwemafirimu anozivikanwa seTitanic uye Kuchengetedza Yakasarudzika Ryan.
Zvimwe zvekuvhura uye kuburitsa izvo zvakaita kuti gore ra 1998 rive rinonakidza. 📷: Google uye IMDB.
Zita rizere Faiq Jefri Bolkiah
Bhavhdhe 9th May 1998
vabereki Jefri Bolkiah (Baba)
dzidzo Woolton Hill Junior & Thorngrove Prep Chikoro
Kutamba Position Winger / midfielder
sekuru Korona Prince Hassanal Bolkiah
Sekuru Omar Ali Saifuddien III (Sekuru)
zvinhu kutamba basketball, kutasva mabhiza, kufamba uye kushambira.
Net Worth $ 20 bhiriyoni
urefu 5 tsoka, 9 inches
Ndinokutendai nekuverenga ichi chekunyora nyora nezve Faiq Bolkiah's biography. At Lifebogger tinovavarira kuringana uye chokwadi munzira yedu inoenderana yekununura biography chokwadi uye nyaya dzehudiki. Kana iwe ukasangana chero chinotaridzika chisina kunaka mune ino chinyorwa ndapota taura nesu kana isa chirevo mubhokisi pazasi.
Shinji Kagawa Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Andrey Arshavin Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts